Avoahy amin'ny Milo | Martech Zone
Tamin'ny herinandro lasa teo aho dia niresaka tamin'i Rob Eroh, izay mitantana ny ekipa mpamokatra vokatra sy injeniera ao Milo. Milo dia motera fikarohana any an-toerana izay tafiditra mivantana ao amin'ny Point of Sale (POS) na ny Resource Resource (ERP) an'ny mpivarotra. Io dia ahafahan'ny Milo ho motera fikarohana marina indrindra raha ny amin'ny famaritana ireo entana amin'ny lisitra ao amin'ny faritra misy anao. Ny tanjon'i Milo dia ny manana ny vokatra rehetra isaky ny talantalana amin'ny tantara rehetra amin'ny Internet… Ary koa mampihena ny fahasarotan'ny fiantsenana an-tserasera sy ivelan'ny Internet. Tsara ny asan'izy ireo izao!
Tanora vao 2.5 taona ny orinasa saingy efa nahazo mpivarotra antsinjarany 140 mahery miaraka amin'ny toerana 50,000 manerana an'i Etazonia izy ireo ary manampy bebe kokoa isan'andro. Rafitra tsotra manome serivisy mahafinaritra be io. Milo dia mahazo tsena lehibe… ireo mpividy izay maniry azy izao ary tsy te hiandry ny fandefasana azy (toa ahy!). Tsy misy mahasosotra kokoa noho ny fisehosehoana amina magazay iray sy ny famelana azy ireo tsy hanao lisitra… ka i Milo ihany koa no nikarakara izany. Ity misy ohatra iray nataoko tamin'ny fahitalavitra LCD manodidina an'i Indianapolis:
Ny lakilen'ny fahombiazan'i Milo dia ny nanaovan'izy ireo ny ezaka tamin'ny fampidirana… raha ny marina dia nandefa an'i Milo Fetch, serivisy beta ary fampidirina miaraka amin'ny Intuit QuickBooks Point of Sale, Intuit Quickbooks Pro, Microsoft Dynamics Retail Management System, Retail Pro sy Comcash Point of Sale.
Milo inventory dia efa misy amin'ny alàlan'ny RedLaser, fampiharana scanner maimaimpoana ho an'ny iPhone sy Android. Milo koa efa misy amin'ny Android. Ary amin'ny 2012 Milo dia ampidirina amina fampiharana finday eBay hafa. Ankoatry ny fikarohana fotsiny, Milo dia mizaha toetra ny fizahana fizahana ihany koa. Alao an-tsaina izany… mitady zavatra iray, mividiana, ary mivoaka ny fivarotana izay efa voatahiry eo an-jorony!
Raha mpivarotra ianao dia alao amin'ny Internet izao ny tahirinao Milo.
Tags: Toerana fivarotana ComcashEbayToeram-pivarotana Intuit QuickBooksIntuit Quickbooks Profikarohana any an-toeranaRafitra fitantanana Microsoft Dynamics RetailMilomilo makaRetail Pro
Mar 21, 2012 amin'ny 4: 26 AM
Doug, mampahatsiahy ahy kely an'i Zaarly sy ny TaskRabbit tiako indrindra.